Nagu saabsan - Ruisheng International Trade Co., Ltd.
(Ruisheng Cuntada Teknolojiyada Co., Ltd.)
Waxaan nahay Wakiilka Iibinta & Iibsiga oo ku takhasusay Waxyaabaha ay ka kooban tahay Cuntada iyo waxyaabaha lagu daro cuntada.
Xafiiskayagu wuxuu ku yaalaa Jiaxing City, oo wax yar u jira garoonka diyaaradaha ee Shanghai Pudong & Hongqiao.
Waxaan nahay koox khibrad u leh Iibinta, Kalluumeysiga iyo Maareynta Sarkaalka Bixinta Qalabka oo in ka badan 20 sano khibrad wadareed ugu jira Waxyaabaha ay ka kooban tahay Cuntada.
Waxaan bixinaa taageero dhammaad-dhammaad ah, oo ku xiraya macaamiisheenna alaabada saxda ah si ay ula kulmaan baahidooda gaarka ah.
Waxaan ku siinaa dalab iyo taageero horumar suuq in ka badan 30 dal oo ka kooban Koofur-bari Aasiya, Australia, Yurub, Afrika iyo Koonfurta Ameerika.
Waxaan haynaa shabakad ballaadhan oo ah la-hawlgalayaal sahay la isku halleyn karo oo si wadajir ah ula shaqeeya si loo hubiyo natiijooyinka qiimaha ugu wanaagsan ee dhammaan macaamiisheenna.
Waxaan nahay heshiisyo gaar ah oo lala galo soosaarayaasha sumcadda badan leh ee baastada galaaska iyo khudradda fuuqbaxa ah.
1. Khudaarta Fuuqbax
Waxaan bixinaa noocyo badan oo khudaar tayo sare leh (jumlad ama caado la buuxiyey)
chives fuuq bax ah, cagaaran fuuqbax, karootada fuuq baxday, basasha fuuqbaxan, toon fuuq bax ah, broccoli fuuq baxay, kaabajka fuuqbaxay, aan tayo lahayn, budada khudradda ee fuuq baxday
2. Muraayad Noodle / Vermicelli
Noocyo xiiso leh oo dhadhan sax ah
Koobka Vegan Cup Glass Noodle, Baasto Istaar, Istaar baradhada macaan, Baradho Baradho, Istarooga Taabioca
3. Cuntooyinka lagu daro
Waxaan qaadnaa noocyo badan oo heer sare ah iyo waxyaabo qaas ah oo lagu daro cuntada (jumlad ahaan ama caadooyin la buuxiyey)
Macaaneeye (Fructose & Stevia), Dhumucda, Kordhinta nafaqada, Kaydinta, Antioxidant, Acidulant, Fiitamiinada, Aamino acids, Khudradda qudaarta, Fiiqa digirta, Xididdada Corn, Xiddigaha wax laga beddelay
- Ketchup, Waxyaabaha Kulkulul Kulul
5. Ku darida Quudinta
Cuntada hadhuudhka Bariiska bariiska, Cunnada kalluunka, Cunto digaag
Waxaan nahay dad dhaqdhaqaaq badan, dhaqso badan, oo waxtar leh
Waxaan raadineynaa xitaa alaabada ugu adag in la helo
Waxaan aad ugu farxi doonnaa macaamiisheenna inay ku tiirsanaadaan Ruisheng inuu noqdo wakiilka takhasuska u leh iibsiga ee Shiinaha.
Waxaan xitaa gacan ka geysan karnaa iibka macaamiishayada wax soo saarkooda oo dib loogu soo celiyo Shiinaha.
Maxaa Ruisheng kuu samayn karaa?
Ganacsi kastaa wuxuu leeyahay shuruudihiisa shaqsiyeed.
Hadafkeenu waa inaan u fidino macaamiil kasto adeeg si aan u hubino inaad dhamaantiin heshaan xalka ugu fiican ee aad ku dabooli kartaan baahiyahaaga.
Kordhinta Shiinaha waxay noqon kartaa mid culus.
Waxaan kuu fududeyneynaa adiga.
Waxaan u noqon doonnaa isku-duwahaaga "One-Stop Consolidator" waxyaabo badan oo tayo leh.
Waxaan si xoogan u aaminsanahay in kastoo qiimaha markasta muhiim yahay - ay tahay qiimaha ku guuleysta maalinta dhammaan ganacsiyada.
Waxaan si dhow ula shaqeyn doonaa si aan u fahamno baahiyahaaga si aad alaabada saxda ah ugu geyso albaabkaaga. Ruisheng waxay awood u leedahay inay wakiil uga noqoto wakiilkaaga wax iibsiga ee Shiinaha si ay u taageerto horumarinta sii kordheysa ee alaabada & codsiyada cusub.
At Ruisheng balan qaadkeenu waa inaan kuu xaqiijino alaabooyinka ugu tayada sareeya ee kugu soo gaarsiin doona waxqabadka qiimaha ugu fiican.
Ujeeddadeennu waa inaan kuu oggolaano inaad ku guuleysato faa'iidada ugu badan.
Hadafkeenu waa inaan dhisno iskaashi istiraatiijiyad ganacsi oo muddo dheer ah macaamiisheenna oo dhan.
Hal ku dhig waa Guul-guuleysto Faa'iidada Wadajirka ah.
Fikradda Ganacsiga Ruisheng
Inaad si dhow, wada shaqeyn, iyo hufnaan leh ula shaqeyso dhammaan macaamiisha si aad u hubiso inaad heshay waxaad u baahan tahay.
Waxaan ka faa'iideysan doonnaa waayo-aragnimadeena soo-saarista, xirfadda gorgortanka, aqoonta farsamada iyo shabakad ballaaran si loo hubiyo in macaamil kasta uu qiimo run ah ka helo alaabooyinka aan bixinno.
Kooxaheena heer sare waxay si habsami leh oo hufan ula tacaali karaan iskuna duwanaan karaan caqabad kasta.
Waxaan ku kalsoonahay qaabka wada shaqeynta macaamiisha oo waxaan muhiimada weyn siinaynaa macaamiil walba badeecadiisa iyo shuruudaha tayada.
Nidaamkeena Maareynta Nidaamka Nidaamsan ayaa had iyo jeer kugula socodsiin doona wixii ku saabsan baaritaanka, shay-baarka, dalabka, iyo heerka xamuulka iyo waliba damaanad qaadka dhammaan waraaqaha ku habboon ee lagama maarmaanka ah.
Waxaan aad u rajeyneynaa inaan kaa caawinno baahiyahaaga.
Taurine, Karootada qalalan Jumlada, Budada Karootada qalalan, Baradho la jarjaray, L - Phenylalanine (PHE), Vermicelli,